Kutheni ama-arhente e-estate adingeka ukuba afumane i-backlink ngaphezulu ephezulu?
Kukhona umgaqo owodwa ozinzile kwi-injini yokukhangela injini ukuba amabanga angaphezulu okufuneka ube nawo kumaphepha kwiwebhusayithi yakho, ngcono umxholo wakho uya kuba neendawo ezahlukeneyo ezichaphazelekayo kwiimfuno zoshishino lwakho. Nangona kunjalo, amaqhinga okuqhagamshelanisa amaqhinga ahlukeneyo kweshishini ukuya kwishishini kwaye ukuba uphumelele kufuneka ube neendlela ezikhethekileyo. Ngokomzekelo, umkhankaso we-backlinking uhluke kakhulu kwizentengiso zezindlu.
Njengomthetho, ii-webmasters zizalisekisa izicwangciso ezilandelayo ezisisiseko xa ziqala ukwandisa i-injini ye-injini ye-injini ye-domain:
amanqaku amatsha kwiwebhusayithi kunye nokuhlaziywa kwimizila yeendaba zoluntu;
ukudala i-backlink kwi-domain entsha;
gcina isantya esifanayo sokuthumela umxholo omtsha kwiblogi yakho.
Zonke iindlela ezikhankanyiweyo ngasentla ziya kukunika umphumo omuhle xa uqhubeka ngokuphinda uziphindiselele kwisiza sakho. Nangona kunjalo, ukuba unokuphakamisa igunya lakho lomenzi kwiinjini zokukhangela ngokukhawuleza, kufuneka ufumane ngakumbi ukudala nokuphumeza ezinye iindlela zokwakha izixhobo ezifanelekileyo.
Njenge-niche ye-real estate yemakethe ithathwa njengeyona nto ikhuphisana ngayo kwimarike yedijithali, uya kuba nokuqala ngokukhuphisana. Ukukhupha i-niche yakho yeentengiso, kufuneka ucinge ngokufanelekileyo kwaye wenze i-backlink kwiindlela ezahlukeneyo ezibucayi. Ingongoma kufuneka bajonge ngokwemvelo iinjini zombini kunye nabasebenzisi. Kufuneka ube nenjongo ethile yokulungiswa kwakho kwaye udibanise umkhankaso wokwakha. Ngaphandle koko, uya kugqiba neziphumo ezimbi. Ukwenza isigaba kwi-TOP ye-SERP ayikwazi ukukhonzwa njengenjongo yoshishino lokuqala. Ingxelo ebanzi ngokubanzi ukuba akunakukunika umphumo ontle. Udinga ukwahlula le ngcamango enkulu kwiinkqubo ezincinci kunye nezincinci ezifana nokwakha iinqununu zekhwalithi okanye ukudala umxholo wokubandakanya.
Ukuba injongo yakho ye-intanethi ye-intanethi kukufumana i-backlinks, kufuneka uphakame umbuzo olandelayo:
Ingaba i-backlink ibonakala ibonakala kumxholo, okanye kubonakala ngathi ndithenge le sixhumanisi kwiinjongo zentengiso?
Yiyiphi imigaqo yophando ndizama ukuyibeka kwi-SERP?
Kuphi kwiwebhusayithi yam i-backlink yokuthumela i-traffic?
Ukuba unempendulo ezinyanisekileyo kulo mbuzo, ngoko unokwenza phambili kwaye ukhethe i-campaign yokwakha yekhonkco efanelekileyo ukuvelisa i-backlink ephezulu kwi-domain yakho ye-estate.
Ezi ndlela zilandelayo ziza kukunceda ukuba wenze i-backlink ephezulu kwi-site yakho:
Yenza izithuba zeblogi kwiiblogi zendawo
Enye yeendlela ezindala kunye nezindlela ezifanelekileyo zokufumana i-backlink ephezulu kunye nejoliswe kuyo ukukhangela izithuba zabameli beeblogi ezihlobene niche.Akuthethi ukuba ufanele ukhangele iiblogi zangaphandle, kwaye ungabhala ngolwazi olulungekileyo lweeblogi zasekuhlaleni, iiplati zeendaba zedolophu kunye nokunye. Xa uqala ukuvelisa i-backlinks esemgangathweni kwi-site yakho kwimithombo yewebhu ehloniphekileyo, isayithi lakho lifumana igunya elivela kwiGoogle kwaye lifumana isikhundla esiphakeme kwi-SERP.
Yabelana nomxholo wakho weblog kwiiwebhsayithi
Enye indlela yokufumana amanqaku amaninzi e-backlink aphezulu kukubuyisela umxholo wakho kumxholo weewebhu. Unokwenza kwakhona umxholo wakho ngokutshintsha ifomathi yayo. Ngamanye amagama, zonke izithuba zeblogi ozenzayo zimele zilandelwe ngedokethi yesilayidi, intetho, ividiyo ye-YouTube okanye iseshoni ephilayo ye-Facebook. Ungathumela zonke izicatshulwa ezahlukeneyo zomxholo kuzo zonke iziteshi zentlalo zoluntu kunye nokutsala abasebenzisi abanxulumene nabo Source .